မျိုးသာကီအတွက် ရဲဝံ့ ဒို့ အာဇာနည်: စုတ်ပြတ်နေသော မြို့ တော်ကြီး …. “၂၀၁၀ ကမ္ဘာ့ လူအခွင့်အရေး၏ တိုက်ပွဲနှစ်” မြန်မာ့သွေးအနီရောင် မညစ်စေနဲ့ ။ စစ်ကျွန်ဘ၀လွှတ်မြောက်ကြဖို့တော်လှန်ှရေးသို့့ အသင့်ပြင်
Yangon .final-carter(yangon) by sawyan
မြို့တော်ကြီး ဟာ ခြောက်သွေ့/ဆင်းရဲ မှုတွေနဲ့
မြို့တော်ကြီး ဟာ ရက်စက်သူများကြောင့်
...အရောင်ပြယ်ကာ စုတ်ပြတ်သတ်နေပြီ ….
V2 ကျောင်းတော်ကြီးကို လွမ်းမိတာ ကြာပြီ..
အရောင်ပြယ်ကာ စုတ်ပြတ်အရင်အတိုင်းပဲ …
Cho : ဒါတွေဟာ (ပြောလည်းမပြီးပါ) 2
ဘာကို (စောင့်စားပြီး တမ်းတ)2
အဖြေမရှိပါ ဒီသီိချင်း တစ်ပုဒ် အဖက်တင်ပြီ …….
MUSIC With Acoustic By Carter….
V3 ဘုရားတော်ကြီးကို မဖူးရတာ ကြာပြီ
ကမ္ဘာမှာမြန်မာဟာ ရာဇဝင် သိပ်ရိုင်းပြီ ….
Cho : Key Change N’ Cho:
Composer : PTL743
Band : No idea(Myanmar Carter)
Posted by အာဇာနည် at 1:21 PM